ပွင့်၏ပုံစံရင်ထိုး organza နှင့်ပြီးသားရေထဲကနေအထိကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ အသုံးပြု. လက်ဝတ်ရတနာအတွက်အထူးသဖြင့်အခါ, ယနေ့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဟောင်းကိုဓမ္မသီချင်းတစ်ဦးအလှတရားနှင့်ဣတ္သင်္ကေတအဖြစ်ပန်းပွင့်ဟာကဗျာဆရာတွေ, ဤသင်္ကေတသေးကုန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ - ကမကြာခဏလက်ဝတ်ရတနာ, ချည်မျှင်နှင့်အထည်, ဒီဇိုင်းအတွက်အသုံးပြုနှင့်ပန်းပွင့်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်ရင်ထိုး ပို. ဘုံသည်အခြားပုံစံများအတွက်ထက်ဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ပုတီး - လူအတော်များများသည်, သို့သော်အချို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဝါသနာအရ - တကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ပစ္စည်းစျေးကြီးပေမယ့်အဆင်းလှမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့ပုတီးလက်ဝတ်ရတနာအလွန်ရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါအလှဆင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမာစတာဝိညာဉျကိုစက်ပေါ်ကို trinkets နှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုငျ, ဤ၏တန်ဖိုးကိုတိုးပွါး ပုတီး၏ရင်ထိုး ။
အစိမ်းရောင်အကိုင်းအခက်နှင့်အတူထိပ်ဆုံးထားတဲ့အနီရောင်ပန်းပွင့် - အများစုကတော့ပုတီးရင်ထိုးဘိန်းနှင့်နှင်းဆီများမှာ prototypes ။
ထိုးပြီးပန်းပွင့် - ဆောင်းတွင်းနှင့်နွေဦးထုပ်နှင့်အင်္ကျီတစ်မကြာခဏဧည့်သည်များနှင့်ထို့ထက် ပို. ခဲ - အင်္ကျီ။ အဆိုပါကြိုးပေါ် မူတည်. အရောင်ပုံစံများအမျိုးမျိုးထပ်ဖွ, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးပျူငှါနွေးထွေးသောထုတ်ကုန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းပွင့်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက်ရင်ထိုးမာစတာလက်နက်ဖြစ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး - အရှင်မကြာခဏတစ်ရှူးအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြု - နှင့်သွင်းယူနှင့်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်စ။
အများစုကတော့, အထည်အလိပ်ပန်းပွင့်နှင်းဆီပန်း, chrysanthemums နှင့်နှင်းတောပေးအပ်သည်။
ကထဲကပွင့်ချပ်ဖြတ်ပန်းပွင့်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အတွက် multi-ရင်ထိုးဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အရမ်းကြမ်းပစ္စည်း - ဒါဟာအရေပြားကြောင်းထင်ရပေသည်။ သို့သော် needlewoman သူ့ကိုအတွက်အလားအလာမြင်လျှင်, ယနေ့အလွန်ရေပန်းစားသားရေအရောင်အဆင်း။
သားရေရင်ထိုးရှေ့ပြေးပုံစံကိုမကြာခဏ chrysanthemums နှင့် Aster ဖြစ်ကြသည်။
ယင်းရင်ထိုးလုပ်ရာမှပစ္စည်းပေါ် မူတည်. ကြောင့်အမှုအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ အိတ်, အကျီနှင့်ဦးထုပ်, အထည် - - အင်္ကျီများနှင့်ဆင်မြန်း, ရင်ထိုးနှင့်ပုတီး - ဇာထိုးပန်းထိုးရင်ထိုးဦးထုပ်နှင့်အင်္ကျီ, သားရေနှင့်အတူအလှဆင် ဂျင်းအကျီ နဲ့အင်္ကျီ။
Chanel သှေးဆောငျ Sensuelle
ဂီက de Loewe
ကုဗ zirconia နှင့်အတူ Silver, ပုတီး
Eddie Redmayne နှင့်ဟန္န Begshou Met Gala 2017 afterparty ခွင့်မပြု
မိန်းကလေးများအဘို့ပြင်သစ်သတင်းစာ - မျိုးစုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် technique ကို
မိန်းကလေးများအဘို့အ Hipster စတိုင်
မိုက်ကယ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဘယ်အရာကိုမ
Kefir နှင့်အတူ pancakes ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ငံပြာရည်နှင့်အတူ Goulash ဝက်သား - စာရွက်
ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင် 2014 Papilė